IGNOME 41 beta ifika nokuthuthuka kwesixhumi esibonakalayo, amaphaneli, ukusekelwa nokuningi | Kusuka kuLinux
I-GNOME 41 beta ifika nokuthuthukiswa kwesibonisi, amaphaneli, ukusekelwa nokuningi
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule Kuvulwe Ukukhishwa Kwe-Beta Okokuqala, ebimise ukubanda kuzinguquko ze-UI ne-API. Khumbula, i-GNOME ishintshele enkulumweni entsha, lapho kukhishwe inguqulo engu-40.0 esikhundleni se-3.40 entwasahlobo, ilandelwa ngumsebenzi egatsheni elisha elibalulekile elithi 41.x. Izinombolo ezingajwayelekile azisahlotshaniswa nezinguqulo zezilingo, manje eseziqanjwe ngokuthi i-alpha, i-beta ne-rc.
Ngezinguquko kule nguqulo ye-beta ye-GNOME 41 ukusekelwa okusha kwezigaba ohlelweni lwezaziso kuyagqanyiswaNgaphezu kweqiniso lokuthi ukwakheka kohlelo kufaka phakathi isikhombimsebenzisi sokushaya izingcingo kuma-GNOME Izingcingo, okunezela ekwenzeni izingcingo ngabasebenza ngamaselula, kungeze ukusekelwa kwesivumelwano se-SIP nokwenza izingcingo nge-VoIP.
Futhi, I-GDM manje inamandla okuqala amaseshini asuselwa kuWayland noma ngabe isikrini sokungena sisuselwa ku-X.Org futhi sivumela ukusebenzisa amaseshini we-Wayland kumasistimu ane-NVIDIA GPUs.
Olunye ushintsho olugqamile yilolo amaphaneli amasha kanye nokwenza imisebenzi eminingi kufakiwe ku-configurator (Isikhungo Sokulawula se-GNOME) ukulawula ukuxhumana ngokusebenzisa ama-opharetha weselula bese ukhetha izindlela zokwenza imisebenzi eminingi, kanye nenketho engeziwe yokukhubaza ukugqwayiza.
Ku-interface ye umshini wokubala uphinde waklanywa kabusha ngokuphelele, manje ezivumelanisa ngokuzenzakalela nosayizi wesikrini kumadivayisi eselula.
Isibukeli esakhelwe ngaphakathi sePDF PDF.js sibuyekeziwe kusiphequluli se-Epiphany futhi kungezwe isikhangiso se-YouTube esisekelwe kwisikripthi se-AdGuard.
Ikhalenda labahleli manje selisekela ukungenisa imicimbi nokuvula amafayela e-ICS. Kuphakanyiswe ithulusi lamathuluzi elisha ngolwazi mayelana nomcimbi.
Kumenenja yefayela leNautilus, ingxoxo yokuphatha ukucindezelwa iphinde yahlelwa kabusha futhi kwanezelwa namandla okwenza izinqolobane ezivikelwe nge-password ezivikelwe ngephasiwedi.
Idiski ye-gnome isebenzisa i-LUKS2 ukubethela. Kungezwe ibhokisi ukumisa umnikazi we-FS.
Ibhokisi lengxoxo lokuxhuma izinqolobane ezivela eceleni libuyiselwa kusilekeleli sokuqala sokusetha.
Ukuhlelwa kwesixhumi esibonakalayo se-GNOME Music kushintshiwe.
I-GNOME Shell inikeza ukusekelwa kokusebenzisa izinhlelo ze-X11 zisebenzisa i-Xwayland kumasistimu angasebenzisi i-systemd ekuphathweni kweseshini.
Amabhokisi we-GNOME engeza ukusekelwa kokudlala umsindo kusuka ezindaweni ezisebenzisa i-VNC ukuxhuma.
Ukwethulwa kuhlelelwe uSepthemba 22, 2021 Futhi kubo bonke labo abanentshisekelo yokukwazi ukwazi izindaba esezilungisiwe, bayanikezwa okwakhiwa kokuhlola kusuka kuphrojekthi yesistimu yokusebenza ye-GNOME ukuhlola le beta ye-GNOME 41. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo, ungabheka imininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Ekugcineni, kufanele futhi ukushiwo abakhishwe ngabathuthukisi be-GNOMEnoma ikhathalogi entsha yohlelo lokusebenza, apps.gnome.org, enikeza ukukhethwa kwezicelo ezinhle kakhulu ezidalwe ngokuya ngefilosofi yomphakathi we-GNOME futhi ezihlanganisa ngaphandle komthungo nedeskithophu.
Kunikelwa izigaba ezintathu: izinhlelo zokusebenza eziyinhloko, izinhlelo zokusebenza ezihambisana nomphakathi ezakhiwe ngohlelo lwe-GNOME Circle, nezinhlelo zokusebenza zonjiniyela. Ikhathalogi iphinde inikeze izinhlelo zokusebenza zeselula ezakhiwe ngobuchwepheshe be-GNOME, ezimakwe ezinhlwini ngesithonjana esikhethekile.
Ngezici zekhathalogu, kuyabonakala:
Gxila ekubandakanyeni abasebenzisi kunqubo yentuthuko ngokuthumela impendulo, ukubamba iqhaza ekuhumusheni i-interface ngezilimi ezahlukahlukene, nokunikezela ngosizo lwezezimali.
Incazelo ihunyushelwa inani elikhulu lezilimi.
Nikeza ngemininingwane yolwazi ebuyekeziwe ngokuya ngemethadatha esetshenziswe yi-GNOME Software neFlathub.
Amandla wokusingatha izinhlelo zokusebenza ezingekho kukhathalogi ye-Flathub (ngokwesibonelo, izinhlelo zokusebenza ezivela ekusatshalalisweni kwesisekelo).
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngale khathalogi entsha yezinhlelo zokusebenza, ungaxhumana imininingwane ekulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-GNOME 41 beta ifika nokuthuthukiswa kwesibonisi, amaphaneli, ukusekelwa nokuningi